UMQEQESHI WOSUTHU UBONA ESENGAKWAZI UKULUHLENGA - Ilanga News
Home Ezemidlalo UMQEQESHI WOSUTHU UBONA ESENGAKWAZI UKULUHLENGA
UMQEQESHI WOSUTHU UBONA ESENGAKWAZI UKULUHLENGA
UNTSAKO Makhubela weGolden Arrows exine uSiyethemba Sithebe wamaZulu FC ahlulwe ngo-2-1 koweligi ngoMgqibelo ebusuku eJonsson Kings Park Stadium, eThekwini. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
USALOKHU eqhubeke njalo nokuthembisa ukuletha uguquko uJosef Vukusic ongumqeqeshi wamaZulu FC ahlulelwe ekhaya yiLamontville Golden Arrows ngo-2-1 emdlalweni we-Absa Premiership ngoMgqibelo ebusuku eJonsson Kings Park Stadium, eThekwini.
Amagoli okunqobe ngawo i-Arrows avalelwe nguKnox Mutizwa womabili kwathi eloSuthu lashaywa nguSiyethemba Sithebe.
Ngemuva kwalo mdlalo uVukusic utshele abezindaba ukuthi akukho nhlobo emqondweni wakhe ukudinsila lo msebenzi obukeka umesinda.
“Ngiyindoda eqinile futhi ezethembayo ngomsebenzi wayo. Sizolokhu siqhubekile nokulwa. Kangikaze ngikucabange ukwehla esikhundleni. Ngifike ikilabhu inamaphuzu amabili kuphela kodwa njengamanje inangu-20. Sibe neshwa kulo mdlalo ngoba ukuba sikwazile ukuwunqoba ngabe sinyukele endaweni ephezulu kakhulu kwi-log.
“Kangithandi-ke ukuphawula ngabadlali abayalelwe ukungajimi nesikimu esikhulu ukuthi ngiyasibona yini noma cha isikhala sabo. Kakukho engizokusho ngabo,” kusho lo mqeqeshi.
UVukusic ujoyine uSuthu ngo-Mandulo (September) nyakenye lunamaphuzu amabili ebeliwathole ngokudlala imidlalo emibili ngokulingana. Belungakaze lunqobe ngisho umdlalo owodwa kule sizini ngaphansi kobuholi buka-Cavin Johnson ofakwe amasondo.
Ngemuva kokuphela komdlalo, isigejana sabathandi boSuthu sinikele emhubheni ophuma abadlali silinde uVukusic obesaphonswa imibuzo ngabakamabonakude.
Uthe angasondela, laba bala-ndeli abebedinwe beqhuma, ba-mngenela bethi makashiye kule kilabhu.
Previous articleBakhala ngocansi “oluphazamisa abafundi”
Next articleUDINWE UYAQHUMA UMQEQESHI WE-CHIEFS